မြန်မာ ရိုဟင်ဂျာ စာကြည့်တိုက်: အင်တာနက်ပေါ်က ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်မှု တရားစွဲမည်
အင်တာနက်ပေါ်က ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်မှု တရားစွဲမည်
အင်တာနက် Youtube မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဗီဒီယိုရိုက်ပြီး အမြင်သဘောထားမတူတဲ့ အခြားသူတွေကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ အသရေပျက်အောင် တိုက်ခိုက်တာတွေ ဖြစ်လာတာကြောင့် လန်ဒန် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်ရဲ့ ဧည့်ပညာရှင် ဒေါက်တာဇာနည်က ဥပဒေအရ တရားစွဲဖို့ ပြင်ဆင်နေကြောင်း RFA ကို ဒီကနေ့ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဇွန်လက စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေကို အခြေခံပြီး အင်တာနက်ပေါ်မှာ လူမျိုးရေးအရ မုန်းတီးမှုကို အခြေခံတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်တာတွေ ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
"နောက်ဆုံးပေါ့နော်။ Youtube ပေါ်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဗီဒီယို ရိုက်ပြီးတော့ တင်ပေးလိုက်တယ်။ တင်ပေးလိုက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ နာမယ်က ကိုငြိမ်းချမ်း။ သူ့အဖေက မြန်မာ့ တပ်မတော်က ရေတပ်က အရာရှိဟောင်း အငြိမ်း တစ်ယောက်ပေါ့နော်။ တပ်က အရာရှိဟောင်း သားသမီးတစ်ယောက်က အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ပညာသင်ပြီးတော့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လွတ်လပ်မှု အခွင့်အရေးတွေကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့ ကိုယ့် ဗမာအချင်းချင်း သွားပုပ်လေလွင့် ပြောမယ်။ မတရား တိုက်ခိုက်တာတွေ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ရှေ့နေရှေ့ရပ် အသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ ဒီကိစ္စကို ဘယ်လို အရေးယူရမလဲဆိုတာကို ကျနော်တို့ စကားပြောနေပါတယ်။"
ဒေါက်တာဇာနည်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ အသရေဖျက်တဲ့ အနေနဲ့ ပြောဆိုထားတဲ့ Youtube ဗီဒီယိုဟာ ခြောက်မိနစ်စာ ရှိပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်က ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အသရေ လိုက်လံဖျက်ဆီးနေသူလို့ သံသယရှိဖွယ် ဒေါက်တာငြိမ်းချမ်း ဆိုသူဟာ ဒေါက်တာဇာနည် အပါအ၀င် အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာပညာရှင် အချို့ကို သူဟာ မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုဒ် http://www.ucl.ac.uk/~ucahmnc/ ကိုလည်း အီးမေးလ်တွေက တဆင့် ဖြန့်ဖြူး ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း ဒေါက်တာဇာနည်က ပြောပါတယ်။
သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ University College London ကနေ သင်္ချာဘာသာရပ်နဲ့ မကြာသေးခင်ကမှ Ph.D ဒေါက်တာဘွဲ့ ရရှိထားတယ်လို့ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်္ဂလန် ဥပဒေနဲ့အညီ ဒေါက်တာငြိမ်းချမ်း ဆိုသူကို တရားစွဲနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဒေါက်တာဇာနည်က ဆိုပါတယ်။
အလားတူပဲ အင်္ဂလန် အခြေစိုက် ဘားမားကမ်ပိန်း (ယူကေ) ကိုလည်း ရိုဟင်ဂျာ ထောက်ခံသူတွေ ဆိုပြီး အင်တာနက်ကနေ တဆင့် ခြိမ်းခြောက် တိုက်ခိုက်တဲ့ စာတွေ ဆက်တိုက် ပေးပို့နေတဲ့ အခြေအနေဟာ စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်လာနေပြီလို့ အဖွဲ့ရဲ့ ညွန်ကြားရေးမှုး Mark Farmaner က ပြောပါတယ်။
ကာရာအိုကေ မီးလောငျလို့ တရုတျ ၁၈ ဦးသေ
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီသီတင်းပတ်ကုန် စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ့် အာဆီယံ ထိပ်သီးညီလာခံကို တက်ရောက်​မည်​ မဟုတ်​
Targeting Rohingya Muslims in Burma
Rohingya could be facing threat of ethnic cleansin...
Protesters around the World denounces Rohingya Mus...
MP U Shwe Maung Explained on Amendment 1982 Citize...
Police harassment increase in Maungdaw Arakan, Mya...
'Rohingyas targeted due to their faith' - Press TV...
BURMA’S ROHINGYA ORIGIN IN THE ANCIENT KINGDOM OF ...
Mass arrest going continuous in Maungdaw
Relocate Rohingya villages, arrest Rohingya villag...
During 4th regular session, U Shwe Maung discussed...
ဦးသိန်းစိန်အား ဖိတ်ကြားထားမှု ဗြိတိန် ပြန်ရုတ်သိမ်...
Burma: Planned Religious And Racial Riots Against ...
London-based think tank urges protection for Rohin...
House speaker condemns killings of muslim Rohingya...
Authority again mass arrests in Northern Arakan
UK Must Act on Arakan and Rohingya Crisis
ပါကစ္စတန် လူ့အခွင့်အရေး ခေါင်းဆောင် ရခိုင်ပြည်နယ် လ...
Burma,Authority targets religious leaders in Maung...
OIC leads global campaign to protect Rohingya Musl...
Myanmar: Abuses against Rohingya erode human right...
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို ထိုင်းသတင်းစာက ပြင်းထန်စွာ ဝေဖ...
Burmese Muslims targeted in communal violence, say...
Myanmar: Rohingya community under attack
Amnesty Int'l: Myanmar's Rohingyas being targeted
Genocide Emergency: Western Myanmar, Rakhine State...
Updated news of Rathedaung Township on July 19, 20...
Machete Massacre in Arakan: The Hidden Face of Bur...
Religious cleansing: crime against humanity
No security for Rohingyas under so-called emergenc...
Iran urges intl. organizations to investigate kill...
Stop the killing of Rohingyas
Update crisis of Arakan
US Muslims plea for end to Rohingyas plight
Statement by civil society organisations deeply co...
ဒေါက်တာမြင့်သိန်းမှ မြန်မာမွတ်စလင်မ် သမိုင်းဖြစ်စဥ...
Rohingya pictures news in Arakan,myanmar
Rohingya Muslims face starvation
Update information of Maungdaw Township on July 15...
ရိုဟင်ဂျာအရေး ထောက်ခံမှုအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများ ကြုံရ...
တွေးကြည့်ကြပါ | ကျော်ဝင်း (UK)
ISNA Calls for Human Rights for Rohingya Muslims i...
The OIC expresses grave concern over the situation...
UN refugee chief seesasilver lining on clouds ov...
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခနှင့် အဖြစ်...
A analyst presented by PressTV with the clear in d...
AD 1727 ANCIENT MOSQUES FORCIBLY CONVERTED IN TO ...
စိတ်ကူးထဲက အပိုင်းအစများ | ခေဋီဈက်အို
Burma: Apartheid Against Rohingyas In Arakan A Con...
Emergency Crisis of Arakan
ဦးစိန္တာ၏ ရခိုင်နိုင်ငံတော် (၃)
အမှန်တရားကို ဖျက်ဆီးခံနေရသော လူသားတစ်ရပ်
မျက်နှာလိုက်တဲ့ တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်
မြန်မာရိုဟင်ဂျာများအသင်း(ဂျပန်)မှ သမ္မတကြီး ဦးသိန်...
မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် လူမျိုးရေးအစွန်းရောက် မုန်းတီး...
Rohingya Muslims under attack by Racist Rakhine te...
လူ့ အခွင့်အရေး မူဝါဒနဲ့ လျော်ညီတဲ့ ဥပဒေသစ်တရပ် ပြဋ္ဌ...
Update news of northern Arakan on July 10, 2012
၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင် အစုလိုက် အပြုံလိုက် အကြမ်ဖက် မျိုး...
Akyab Amlapara စစ်တွေ့ အမ္မလာဖရာရွာ
Burma: Campaign Groups Call For Citizenship Law Re...
ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမားတို့ရဲ့  လက်ချက်ကြောင့် ပြာပြုံ...
စစ်တွေ့မြို့ မှာ ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမားတို့၏ သတ်ဖြတ...
ဂျပန်နိုင်ငံရောက် ရိုဟင်ဂျာများနှင့် တိုင်းရင်းသာ...
Natala and security forces destroy Holly Qurans, r...
Rohingyas in Arakan Burma since 7th century in 201...
Let Myanmar end Rohingyas’ plight
ဘင်္ဂါလီရခိုင်ကုလားတွေက ရိုဟင်ဂျာကို ဘင်္ဂါလီကုလားတဲ့လ...
ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို ရှုတ်ထွေးအောင် လုပ်နေသူနှ...
Burma: Authorities Target Rohingya After Violence,...
Help the Arakan Muslims as soon as possible
ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားများအပေါ် ခေတ်အဆက်ဆက်က ဆင်နွှဲခဲ့ေ...
ကုလသမဂ္ဂမှ ရခိုင်အရေး ယနေ့ သတင်းအစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်...
မြန်မာမွတ်စလင်ဆိုတာဘာလဲ? အပိုင်း ၄
ABBU.MYANMAR (RNP) WHY ?????? ARE YOU SLEEPING R...
Mass Arrests of Rohingya Taking Place (BROUK Press...
Voice the Rohingya - Restless beings protest
Restless Beings - Voice The Rohingya Protest - 2nd...
Authority again arrest Rohingya community in Maung...
ဦးစိန္တာ၏ ရခိုင်နိုင်ငံတော်- (၂) | ဌေးလွင်ဦး
နိုင်ငံတကာသတင်း ဌာနများမှ သိရတဲ့ နောက်ဆုံးရ ရခိုင်...
အင်တာနက်လူရိုင်းနှင့် တဖက်သက် ပြစ်မှုများ
Rohingya picture news
Cheered In Europe, Suu Kyi Faces Crises In Myanmar...
Myanmar’s minority Muslims under attack
Police arrests more Rohingya in Maungdaw Arakan st...
အစွန့်ရောက် ဘင်္ဂါလီရခိုင် အဝကျွန်းသားများက ကုလားစြု...
Myanmar agrees to take back all Rohingyas
Update Rohingyas situation in Arakan state, myanma...